Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaan la magac baxay Koonfur Galbeed | Star FM
Home Caalamka Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaan la magac baxay Koonfur Galbeed
Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaan la magac baxay Koonfur Galbeed
Guddiga Doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay afti laga qaaday qowmiyado ku nool deegaanka Shucuubta Koonfureed natiijada ka soo baxday ay muujineyso qowmiyadaha aftida laga qaaday inay u codeeyeen in ay sameystaan dowlad deegaan la magac baxay Koonfur Galbeed.
Guddiga oo maanta shaaciyey natiijada aftida shacabkaasi laga qaaday ayaa sheegay 96 boqolkiiba shacabkii codkooda dhiibtay inay u codeeyeen iney noqdaan deegaan madax bannaan oo ka go’ay deegaanki Shucuubta Koonfureed ee ay ka tirsanaayeen.
Codbixinta aftida oo ay iisu diiwangeliyeen 1,344,622 qof waxaa codkooda ka dhiibtay 1,262,679.
Natiijada Aftida iyo aasaaska dowlad deegaankaasi cusubna waxaa go’aanka ugu dambeeya ka gaaraya golaha federeeshiinka ama aqalka sare uu leeyahay dalkaasi Itoobiya.
Deegaankan cusub ee Koonfur Galbeed la magac baxay ayaa noqonayaa deegaakii labaad ee ku soo biiro qaab dhismeedki dowladda Federaalka tani iyo marki Abiy Axmad uu hoggaanka dalka Itoobiya qabtay, iyada oo sanadkii horrana golaha uu meel mariyey dowlad deegaanka Sidaama oo noqday deegaanki 10-aad oo xubin ka ah dowladda Federaalka.